Huawei သည် Android ကိုအသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်ယခု Kirin OS ပေါ်တွင်လောင်းမည်လား။ | Androidsis
Huawei ၎င်း၏သမိုင်း၌အဆိုးဆုံးအချိန်ကတဆင့်သွားနေသည်။ အကြီးမားဆုံးအဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်နိုင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီ ဥရောပရှိစမတ်ဖုန်းရောင်းချသူ, ကျေးဇူးတော်မှကျဆင်းခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်း? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည်ကုမ္ပဏီများအား၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအာရှထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသည်။
ဆိုလိုတာကလား။ ကောင်းပြီဘာလဲ Huawei သည် Android ကို operating system တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးမပြုပါ။ ဟုတ်ပါသည်၊ သူတို့သည် Qualcomm နှင့် Intel မှအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးမပြုတော့ရုံသာမကဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းမရရှိနိုင်ပါ။ ကုမ္ပဏီအဘယ်သို့ပြုမည်နည်း ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတကယ်ပဲမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ Kirin OS, Huawei ၏လည်ပတ်မှုစနစ်။
1 Kirin OS ဆိုတာဘာလဲ။ Android ကိုခံနိုင်ပါသလား။
1.1 Kirin OS သည် Huawei ၏ Fuchsia ရောက်ရှိလာခြင်း၏အဖြေဖြစ်သည်
2 Kirin OS ကိုစျေးကွက်တွင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
2.1 Kirin OS ဟာ Android ရဲ့ fork တစ်ခုဖြစ်မလား။
Kirin OS ဆိုတာဘာလဲ။ Android ကိုခံနိုင်ပါသလား။
သုံးစွဲသူများ၏ပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ် သင်၏ Huawei ဖုန်းမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိပါ။ ယခုအချိန်အထိတော့လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါ။ သို့သော်ရောင်းချပြီးသောကိရိယာများသည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်အမင်းစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
သို့သော် Huawei ၏မိုဘိုင်းဌာနခွဲသည်မည်သို့ဖြစ်သွားမည်နည်း။ အခုသူတို့ Android နဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူး၊ အထူးသဖြင့် Firefox OS နှင့် Windows Phone ပျက်ကွက်ပြီးနောက်အခြားဂေဟစနစ်မရှိပါ။ ကံကောင်းတာကတရုတ်ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဟာဒီအခြေအနေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဂေဟစနစ်ကိုအချိန်အတန်ကြာအလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြတာပါ။ မင်းနာမည်? Kirin OS.
Kirin OS သည် Huawei ၏ Fuchsia ရောက်ရှိလာခြင်း၏အဖြေဖြစ်သည်
Huawei သည် Google ၏စိတ်ကူးအားဖြင့်သိပ်သဘောမကျခဲ့ပါ Chrome OS နဲ့ Android ကို unify လုပ်ပါ တစ်ခုတည်းစနစ်, Fuchsia အတွက်။ သူတို့ကဒီပေါင်းစည်းမှုနဲ့အတူသူတို့ဟာဂူးဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုစတင်ရန်အသုံးပြုသူများရဲ့သံသယများကိုအားသာချက်ယူနိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။ စီမံကိန်းသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်စော။ ရောက်လာလိမ့်မည်။
သတိထားပါ၊ Fuchsia သည်ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက်အစပျိုးပေးရုံသာမက Huawei သည်အမေရိကန်အစိုးရအားဗီတိုအာဏာသုံးရန်စောင့်နေခဲ့သည်သူတို့ဟာ Huawei Mate 20 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးကတည်းကလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေမပါပဲသူတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်သင့်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အာရှထုတ်လုပ်သူရဲ့လက်တော့ပ်ဌာနခွဲဟာရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အမင်းအင်အားကြီးမားမှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် Intel ကိုပရိုဆက်ဆာဖြန့်ချိသူအဖြစ်ဆုံးရှုံးခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Android ကအခြားအိတ်တစ်ခုထဲကနေသဲနေပြီ။ ကုမ္ပဏီသည်တယ်လီဖုန်းဌာန၏ကျေးဇူးကြောင့်ငွေအမြောက်အများရရှိပြီး i ၏အခြေအနေတွင်မပါ ၀ င်စေရန်အစီအစဉ် B ရှိရမည်ndefense သည် ZTE မှခံစားခဲ့ရပြီးတူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသောအခါ.
Kirin OS ကိုစျေးကွက်တွင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏ operating system သည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေဆဲနှင့်ရောက်ရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့သည်။ ပြproblemနာကအတိအကျမှာသူတို့မှာအချိန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏လက်ရှိဖုန်းများသည် Android Q နှင့်နောင်လာမည့်ဖြန့်ချိမှုများ၏အနာဂတ်ကိုမွမ်းမံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ Huawei Mate 30 ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ပြသမည်, လေထဲမှာ။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Kirin OS ကိုအမြန်ဆုံးလည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကောင်းမွန်သောတွန်းအားပေးရန်အရင်းအမြစ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်အရာပေါ်အခြေခံရမည်နည်း ကောင်းပြီ, အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်စတိုင်အတွက်လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်ပါတယ် Line OS Android ကိုအခြေခံသည်။
Kirin OS ဟာ Android ရဲ့ fork တစ်ခုဖြစ်မလား။
Google ၏ operating system သည် open source ဖြစ်ပြီး Linux ကိုအခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့် Huawei အနေဖြင့် Android ကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် operating system ကိုဖန်တီးရန်အခွင့်ကောင်းယူခြင်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူက ၀ န်ဆောင်မှုအများစုကိုပေးနိုင်ရန်အပြင် EMUI ကိုများစွာသတိပေးမည့်ဖော်ရွေသောမျက်နှာပြင်ကိုပေးလိမ့်မည်။
ဤနည်းအားဖြင့် Facebook ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည့် Huawei ၏ operating system နှင့်အပလီကေးရှင်းများအားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ Facebook, Instagram နှင့် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်သင့်သည် Kirin OS ၎င်းသည် operating system အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည်သူ၏အသစ်သောရန်သူအသစ်ကိုထောကျပံ့ပေးသော Donald Trump သည်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။
အခုတော့ Huawei အတွက်အခြေအနေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့အချက်ပဲ။ ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့နောက်ထပ်လွှတ်တင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပစ်ရလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမွမ်းမံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုဖွင့်တာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ Kirin OS နှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာသာကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက Huawei သည်ဤစီမံကိန်းတွင်သာလုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ရှန်ကျန်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မျက်နှာနှင့်စနစ်ရှိသည့်တိုင်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်သည်။ ရှေ့ဆက်မကြည့်မီနှင့်စျေးကွက်သို့မိုဘိုင်းဖုန်းများစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Google ၏ပိတ်ဆို့မှုအပေါ် Huawei ၏တုန့်ပြန်မှု Kirin OS အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာသိရသနည်း
Android ပေါ်ရှိပြက္ခဒိန်အတွက်လည်း Dark mode ကိုရရှိနိုင်ပါသည်